Ukusuka kwihlabathi liphela lezinto eziphefumlelweyo zivela kumoya, into engaqondakaliyo, kwaye ngesondo elibonisiweyo yafumana enye into ngaphakathi kuyo. Ngothando kunye nokuzincama ngoku kusombulule imfihlakalo enkulu: ifumene, njengoKristu, njengoMphefumlo, ngokwayo kuyo yonke into: ukuba ndingu-Wena-wena-ngu-Wena-wena
Vol. 2 NOVEMBA, 1906. 5
Ilungelo lokushicilela, i-1906, nguHW PERCIVAL.
UMOYA njengoko umelwe ngumqondiso we-zodiac aquarius ukwindiza efanayo nakwimo (gemini), kodwa umahluko kumanqanaba ophuhliso ekufikeleleni kuwo phantse awunakubonwa. Umahluko phakathi kwesiqalo sobubumbano sisuka kubumbano, kwihlabathi elingenabantu, kunye nokufikelela kwimanyano ekrelekrele yobukrelekrele emphefumlweni.
Ukuthatyathwa kwengca yingcambu engaziwayo engonakaliswanga evela kuyo umoya, ekuqaleni kwawo onke amaxesha okuvela kwendalo, uphefumlela (umhlaza) ekubonakalisweni kwaye iba yinto ebonakalayo nengenakubonwa yehlabathi kunye nehlabathi kunye nazo zonke iintlobo. Emva koko konke kuyadlula kwaye kusonjululwe ekugqibeleni (ngokusebenzisa i-capricorn) kwi-Original metso yezinto (i-gemini), ukuphinda kuphefumlelwe ukubonakaliswa kwaye kuphinde kusonjululwe. Ngokunjalo ke nasekuqalekeni kobomi behlabathi ngalinye, into esiyibiza ngokuba ngumntu iphefumlelwe kwizinto zokomoya, ithatha imbonakalo ebonakalayo kwaye ngaphandle kokuba ufumene ukungafi kobu bomi, izinto awazibumbayo zisonjululwe ngamazwe awahlukeneyo into eyintsusa yehlabathi lakhe kufuneka iphinde iphulwe de ifumane ukungafi, kwaye idityaniswe kwaye ibe banye ngomphefumlo.
Xa into iphefumlelwe ngaphandle njengomoya-ungena kulwandle lobomi, olungabonakaliyo nokuba lingaqwalaselwanga ziimvakalelo ezibonakalayo, kodwa luqatshelwe ngezenzo zalo kwindiza yalo, yona ke iplanethi yengcinga, -Isisazi). Izinto zokomoya njengobomi zihlala zifuna ukubonakaliswa. Ingena kwiifom ezingabonakaliyo zentsholongwane, kwaye yandise, ibeke phambili, kwaye izakhe ngokwayo kunye neefom ezingabonakaliyo ekubonakaleni. Iyaqhubeka ukucacisa kwaye yandise indlela ekhula isabelana ngesondo, eyona nto ibonakalayo esebenzayo kubomi obonakalisiweyo. Ngomnqweno wesondo uphuhliswa ukuya kwelona nqanaba liphezulu, kwaye ngesenzo sokuphefumla kufakwe engqondweni. Umnqweno uya kuhlala kwindiza yakhe eyindiza yeefomathi kunye neminqweno (virgo-scorpio), kodwa ngokucinga inokutshintshwa, iguqulwe kwaye iphuhliswe.
Umphefumlo ligama elisetyenziswa ngendlela engakhethiyo kwaye lihleli. Ukusetyenziswa kwayo bekuya kubonisa ukuba kwakungumgangatho ongapheliyo ukuba ube unesiqinisekiso kwaye unombala ngegama elandulelayo okanye elilandelayo; Umzekelo, umphefumlo wehlabathi, umphefumlo wesilwanyana, umphefumlo womntu, umphefumlo waphezulu, umphefumlo wendalo iphela, umphefumlo wamaminerali. Umphefumlo ukwinto yonke njengoko zonke izinto zisemphefumlweni, kodwa zonke izinto azibuqondi ubukho bomphefumlo. Umphefumlo ukho kuwo wonke umbandela ukuya kwinqanaba elipheleleyo ukuba into ilungele ukuyiqonda kwaye uyiqonde. Ukuba isetyenziswe ngobukrelekrele, zonke izinto ezisetyenzisiweyo kunye nezingakhethi cala zisetyenziselwe igama elinokuqondwa ngokuqinisekileyo. Ke ngoko ekuthetheni ngomphefumlo ophambili, sithetha ukuba nge-atom, amandla, okanye into yendalo. Ngomphefumlo wamaminerali, sidala uhlobo, imolekyuli, okanye umazibuthe obamba okanye odibanisa iiathom okanye izinto ezenziwe ngayo. Ngomphefumlo wemifuno, bubomi, intsholongwane, okanye iseli emisela amandla ukuba enze ifom kwaye ibangele ukwanda nokukhula kuyilo olucwangcisiweyo. Sibiza umphefumlo wesilwanyana, umnqweno okanye amandla okanye umlilo we-latent, owenziwe ngokudibana nokuphefumla, ojikelezayo, ohlala kuwo, olawulayo, odlayo, kwaye ovelisa ngokutsha iintlobo zawo. Umphefumlo womntu ligama lelo nxalenye okanye inqanaba lengqondo okanye ubuntu obuthile okanye isiqu somntu ngamnye kum - I-mfundo esisiseko emntwini kwaye sisilwa nomnqweno kunye neendlela zaso zokulawula kunye nokuqhuba. Umphefumlo oManyanisiweyo oManyani ububulumko bonke isigqubuthelo sobuso, isivatho, kunye nesithuthi sobukho boLwazi olunye.
Umphefumlo awuyiyo into nangona umphefumlo usisiphelo kunye nophuhliso oluphezulu lwento, izinto ezimbini ezichaseneyo kwindiza enye; Umphefumlo awuphefumli nangona umphefumlo usebenza ngokuphefumla ekuvukeni kobomi bonke; Umphefumlo asibobomi kwaye nangona buchasene nobomi (leo-aquarius) ukanti umphefumlo ngumgaqo wobunye kuzo zonke izinto ezibonisa ubomi; Umphefumlo awuyiyo ifom nangona umphefumlo unxulumene nazo zonke iifom kwabanye ukuba zihlala kwaye zihamba kwaye zinobomi bazo. Umphefumlo awubelani ngesondo nangona umphefumlo usebenzisa isini njengophawu lwawo, ubumdaka, nangokubakho kwawo njenge-androgyne yaphezulu emntwini ngamnye ovumela ingqondo ukuba ilungelelanise kwaye ilungelelanise into yomoya ngesondo kunye nokuyisombulula ibe ngumphefumlo. Umphefumlo awungomnqweno nangona umphefumlo uluthando lokungazingci elinomnqweno ongazalisekisiyo, ongenantloni, okonwabisayo, ongafundiswanga. Umphefumlo awucingelwa nangona umphefumlo uzibonakalisa ngokwengcinga yokuba ngokucinga bonke ubomi kunye neefom ezisezantsi zingaphakanyiswa ziphezulu. Umphefumlo awunguye umntu omnye nangona umphefumlo ububulumko obufana nobunye obuvumela ukuba babodwa bancame ubuntu babo kwaye bandise ubuchwephesha kwaye bazazise ngabo bonke abanye ubuntu kwaye ngaloo ndlela bafumane loo mbonakaliso ilungileyo yothando efunwa ngumntu ngamnye.
Umphefumlo sisiseko sobukrelekrele esaziwayo esisebenzayo sokunxibelelana, sokunxibelelana, kunye nokunxibelelanisa yonke i-atom kwindalo kunye nazo zonke iathom kunye nazo zonke kunye. Njengoko inxibelelanisa kwaye inxulumene neeatom kwaye inxulumene kumanqanaba aqinisekileyo okumbiwa kwezimbiwa, imifuno, izilwanyana, kunye nezikumkani zomntu, ke ikwanxulumene noko kubonakalayo nobukumkani obungabonakaliyo, umhlaba nehlabathi, kunye nenye nenye.
Njengomgaqo-siseko womphefumlo ubuntu emntwini, ukwaziwa kwento eyenza umhlaba wonke ube ngumntu kunye no-Kristu ozingcayo. Umphefumlo ngumbandela oqinisekileyo onika intuthuzelo kwabasentlungwini, baphumle kwabatyhafileyo, amandla kwabazabalazelayo abanobunzima, ubulumko kwabo bayaziyo, noxolo oluthuleyo kwezilumko. Umphefumlo yiyo yonke imigaqo-siseko, isigqubuthelo sobuThixo sokuBazi. Umphefumlo uyazazi zonke izinto, kodwa kukuzazi komntu okuphela kozizo ezinokuzazi ngaphakathi nangaphakathi komphefumlo. Umphefumlo ngumgaqo wothando lwendalo iphela apho zonke izinto zixhaswayo.
Umphefumlo awun fomu. Kuyafana njengokuba no-Kristu no-Kristu engenabo. “U-Krestu” nguMphefumlo osebenza ngokobuntu obonwe ngaphakathi.
Ukungabazi ubukho bomphefumlo, ukungazi kunye nokuzingca kunye nokukhohlakala kuzabalaza ngokuchasene nako njengoko usana lusilwa nemizamo kanina yokuwukhulula. Ukanti umphefumlo uphatha ngobumnene kubo bonke abo bayiphikisayo njengonina ngenxa yobushushu bomsana wakhe.
Xa abantu abathandanayo bebhala ngothando olubangela ukuba indoda okanye umfazi azincame ngenxa yothandekayo, bobabini abatsha kunye nomakazi bayonwabile xa befunda. Abantu abadala bacinga ngamandla kunye nobungangamsha bomlinganiso weqhawe. Bobabini abancinci nabadala baya kucinga kwaye bazinxibelelanise nomlingiswa. Kodwa xa isibhalo sibhala luthando olamshukumisela u-Kristu okanye nawuphi na “omnye umsindisi wehlabathi” ukuba azincame ngenxa yesithandwa sakhe-uluntu- ulutsha kunye nomakazi bayothuka kwingcinga bayithathe njengesihloko esifanele ukubonelelwa emva kokuba badala , okanye ngabo badiniweyo okanye obo bomi, xa ukufa kusondele. Abantu abadala bayamhlonela kwaye bacamngce umhlanguli ngokothuswa zinkolo, kodwa abancinci nabadala abayi kuxhuma nesenzo okanye nalowo usenzileyo, ngaphandle kokuba kube kukukholelwa kwaye benze inzuzo ngesenzo soMsindisi. uthando okanye ukuzincama komthandi othandekayo okanye kukamama ngomntwana wakhe, ikwangumgaqo omnye, nangona ukwandiswa okungapheliyo, okuphembelela uKrestu ukuba anikele ubuntu kwaye andise ubuntu obuvela kwimida emxinwa ubuntu kuyo yonke into kunye nangoluntu lonke. Olu thando okanye umbingelelo alukho kumava endoda okanye umfazi oqhelekileyo, kwaye ke baluthatha njengobalaseleyo kwaye nangaphezulu kwabo, kwaye alulohlobo lwabo. Uhlobo lwabo luthando lomntu lomntu kunye nolomfazi kunye nomzali kunye nomntwana kunye nokuzinikela kunye nokuthandana kwabo. Ukuzincama ngumoya wothando, kwaye nothando luyolo ngedini kuba ngokwenza idini uthando ufumana eyona ndlela igqibeleleyo yokubonisa kunye nolonwabo. Umbono uyefana kwinto nganye, umahluko kukuba lowo uthandanayo kunye nonina benza ngokungxama ngelixa uKrestu esenza ngengqondo, kwaye uthando lubanzi kwaye lukhulu ngakumbi.
Ngenjongo yokwakha umntu ngamnye, I-am-I-ness, ukuphakanyiswa komcimbi kwisimo apho zizazi khona kunye nokuzazi njengobuqu, kuba loo njongo ikhuthaza ukuzingca. Xa ubuntu bufunyenwe, ke imvakalelo yokuzingca iyisebenzisile injongo yayo kwaye kufuneka ishiywe. Izinto zokomoya aziseyonto yomoya. Iyadityaniswa ibe yinto enye, ngoku ezaziyo ukuba ndingu-Wena-Wena-ngu-Wena Apho kumbulala kunye nababuleweyo, ihenyukazi kunye ne-vestal, isidenge kunye nezilumko zodwa. Into ebenza babe banye nguKristu, Umphefumlo.
Ukuphela kokuzingca luthando. Sahlula uthando lokuzingca luthando. Uthando oluncinci, uthando lomntu, kwilizwe lakho elincinci, ngumthengisi wothando onguKristu, Umphefumlo.
Umphefumlo uqala ukubhengeza ubukho bayo emntwini njengesazela, ilizwi elinye. Ilizwi elinye phakathi kwamaphina aliqela ehlabathi lakhe amqhubela ekuziphatheni ngokungakhathali kwaye kuvuse ngaphakathi kubudlelwane bakhe nomntu. Ukuba ilizwi elinye lilandelwa xa liqondayo ukuba liya kuthetha ngako konke isenzo sobomi; Umphefumlo ke uya kuziveza kuye ngelizwi lomntu elikuye njengomphefumlo wobuntu, ubuzalwana behlabathi liphela. Uya kuthi ke abe ngumzalwana, ke uya kwazi ukwazi ukuba mna ndingu-Nguwe, u-Nguwe, kwaye ndiyazi ukuba ungumhlanguli wehlabathi, kwaye ube kunye umphefumlo.
Ukwazi umphefumlo kufuneka kwenziwe ngelixa ubuntu bomntu bufakwe emzimbeni womntu kwaye bephila kweli lizwe lomzimba. Akunakwenziwa ngaphambi kokuzalwa okanye emva kokusweleka okanye ngaphandle komzimba wenyama. Kufuneka yenziwe ngaphakathi komzimba. Umntu kufuneka awazi umphefumlo ngaphakathi emzimbeni womzimba wakhe ngaphambi kokuba umphefumlo waziwe ngokupheleleyo ngaphandle komzimba wenyama. Oku kubhekiselwe kumhleli kwingxaki ka "Isondo," (libra). (Bona Ilizwi, ivolumu 2, No. 1, iphe. 4.)
Kuthethwa ngabafundisi-ntsapho abaphilayo, kwaye kwezinye izibhalo, ukuba lowo umoya uthandayo, uya kuzityhila. Oku kuthetha ukuba kuphela kwabo bafaneleke ngokwasemzimbeni, ngokuziphatha, ngokwengqondo nangokomoya, nangexesha elifanelekileyo, baya kuthi umphefumlo baziwa njengesityhilelo, ukukhanya, ukuzalwa ngokutsha, ubhaptizo, okanye ukukhanya. Indoda ke ihlala kuyo kwaye iyazi ngobomi obutsha kunye nomsebenzi wayo wokwenene, kwaye inegama elitsha. Kwaba njalo xa uYesu wabhaptizwayo-oko kukuthi, xa ingqondo yomntu izale ngokupheleleyo - waba wabizwa ngokuba nguKristu; emva koko waqalisa ubulungiseleli bakhe. Ngokunjalo kwaba njalo ukuba uGautama xa ecamngca phantsi komthi weBo-umthi oyingcwele emzimbeni wenyama wafumana ukukhanya. Oko kukuthi, umphefumlo wazityhila kuye, kwaye wabizwa ngokuba nguBuddha, ukhanyiselwe, kwaye waqala inkonzo yakhe phakathi kwabantu.
Ngamaxesha athile kubomi bomntu apho uphakama ngaphakathi kokukhula okwazi oko, ukusukela kwimicimbi emincinci yobomi behlabathi be-humdrum emsebenzini-wemihla wehlabathi ukuya kwihlabathi elingaphakathi eliya ngaphakathi, elijikeleze, elixhasayo, elinabisa ngaphaya Eli lizwe lincinci lihlwempuzekileyo. Kwimpefumlo, kwisikhanyiso, ngephanyazo, ixesha liyaphela kwaye lehlabathi elingaphakathi livuleka ngaphakathi. Ubukrelekrele ngakumbi kunelanga lilanga elinamawaka amaninzi luvula ngendlela evuthayo okanye engatshisi. Umhlaba neelwandlekazi ezingashukumiyo, amazwekazi ahamba ngesantya esiphezulu, urhwebo olukhawulezayo, kunye nemibalabala emininzi yempucuko; Yinkqantosi zayo zizodwa, yimiyezo evuthiweyo, iintaba zambethe ikhephu. amagqabi awo, iintaka, amarhamncwa asendle nabantu; iiholo zayo zesayensi, ulonwabo, unqulo; Zonke iintlobo elangeni nasemhlabeni nasenyangeni nasezinkwenkwezini ziyaguqulwa kwaye zizukisiwe kwaye zinobuThixo ngobuhle obugqwesileyo kunye nokukhanya okungenasithunzi okukhanya okuvela kuyo yonke indawo ukusuka kwindawo yomphefumlo engaphakathi. Ke umntwana omncinci womsindo, intiyo, umona, ubutshinga, ukubawa, iinkanuko zalomhlaba omncinci zinyamalala kuthando namandla nobulumko obulawula endaweni yomphefumlo, ngaphakathi nangaphandle kwexesha. Umntu obekade esazi njalo ukuhlehla esivela ebuntombini ukuya kwixesha. Kodwa ukubonile ukukhanya, uwave amandla, ulivile izwi. Kwaye nangona engekakhululwa, akasaseki kwaye uyagcuma kwaye uncamathela kwisibambiso sesinyithi sexesha nangona esenokuthwalwa nguwo. Ukusukela koko uphilela ukuguqula ameva kunye nendawo enamatye yomhlaba ube ngamadlelo aluhlaza namasimi achumileyo; ukukhupha ebumnyameni ubuqhetseba, izinambuzane, izinto ezinambuzelayo, kwaye zibaqeqeshe ukuba bangene kwaye banyamezele ukukhanya; ukunceda isidenge esijonge ezantsi kwaye ihambe ngezinyawo nangeenyawo iinyawo zomhlaba ukuba zime nkqo kwaye zifikelele phezulu zikhanyisele; Ubomi buvuma ingoma yobomi kwihlabathi; ukuthambisa imithwalo; ukuvutha kwiintliziyo zabo banqwenelayo, umlilo wedini elikukuthanda umphefumlo; ukunika abantu abasebenza ngexesha abacula ingoma yengoma ebukhali nakwigwebu lentlungu kunye nolonwabo, nabajika babezibophele kumnqamlezo wesinyithi wexesha, ingoma entsha yomphefumlo: uthando lokuzincama . Ngale ndlela uphilela ukunceda abanye; Kwaye ke lo gama ephila, esenza, kwaye ethanda ethe cwaka, woyisa ubomi ngokucinga, imo ngokwazi, ngesondo ngobulumko, umnqweno ngentando, kwaye, efumana ubulumko, uzinikela kwidini lothando kwaye udlula ebomini bakhe kubomi bonke boluntu.
Emva kokubona ukukhanya okokuqala kunye nokuva amandla kunye nokuva ilizwi, umntu ngekhe kwangoko adlulele endaweni yomphefumlo. Uya kuphila ubomi obuninzi emhlabeni, kwaye kubomi ngamnye uya kuhamba ngokuthe cwaka kwaye angaziwa kwindlela yeefom de isenzo sakhe sokuzinikela senze ukuba indawo yomphefumlo iphinde ivule ngaphakathi ngaphakathi xa eya kuphinda afumane uthando lokungazingci, amandla aphilayo , kunye nobulumko bokuthula. Emva koko uya kulandela abangabhubhi abakhe bahamba ngaphambili kwindlela engafanga yeConscious.